Indlela yokudweba inja kwipensile: kwizigaba zabantwana
Zininzi iindlela zokudweba inja kwisinyathelo sepensile ngesinyathelo. Ungayibonisa ngesimo seqhawe le-cartoon okanye wenze ukuba liyenze. Inkqubo yokudweba inja nge pensile iya kubangela umdla omkhulu kubantwana kuphela, kodwa nakubantu abadala. Kwanele ukukhetha uhlobo lwakho oluthandayo kwaye ungaqalisa ukudala.
Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo kubantwana ekudwebeni inja nge pensile
Yintoni eya kuthatha ukutsala inja ipencil? Kubalulekile ukulungiselela oku kulandelayo:
Ewe, ewe, ufuna umnqweno wokupenda, mhlawumbi umdwebo omhle awuyi kusebenza. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukudweba inja kunye neepensile kukulungele ngakumbi kunamaphupha okanye amanqaku. Kodwa ngaphambi kokuqhubela ngqo kwinkqubo, kufuneka uqonde ubunzima babo. Iipencilisi ezinobuninzi zisetyenziselwa ukutyhafaza, ngelixa iipencilisi ezinzima zisetyenziselwa iinqonga.
Imiyalelo 1: njani ukudweba inja ehleliyo kwiprofayili
Ukudweba inja ehleliyo kwiprofayili kwizigaba, ungasebenzisa umyalelo wabaqalayo.
Ukudweba inja kungcono ukuqala ngeempumlo. Ukwenza oku, kufuneka udwebe imigca emibini ephilileyo efana nomnye kwaye ixhunyelelana phezulu, njengesithombeni.
Ukuqhubeka nomgca ophezulu kunye nokuwuguqa, unokufumana intloko nendlebe yenja.
Emva koko kufuneka udwebe omnye umgca ongezantsi kunye neepensile. Iqala ukusuka endlebeni ize ihla. Lo ngumva we inja.
Ngoku ufanele udwebe umgca wesihlunu esisezantsi, isifuba nesisu ngesimo somnye umgca ogobile uhla ukusuka ekhaleni.
Emva koko, kufuneka ubeke amanani amabini: i-semicircle kunye ne-arc. Zifanele zihanjiswe endaweni yeendawo zangaphandle zemilenze yangaphambili neyindilinga. Kwinqanaba elifanayo, kufuneka udwebe ulwimi.
Emva koko unako ukuqhubeka ukubonisa i-paws yenja.
Ekufutshane nephambili, kufuneka udwebe enye inyawo. Musa ukulibala ngomsila.
Ukugqiba umzobo nomfanekiso weengxenye. Kubalulekile ukudweba impumlo, iliso, iminwe kwi-paws.
Yayiyinja enomdla kangaka. Isinyathelo ngasinye sichazwe kwi-photo.
Umyalelo wesi-2: indlela yokudweba inja ephilileyo
Isinyathelo ngesinyathelo kwipensile ungayifaka nayiphi na inzala yeenja. Le ncwadana ifanelekile kubantwana.
Okokuqala kufuneka udwebe ezimbini. Incinci yintloko, enkulu inomzimba wenja. Zidibene nemigca ephilileyo. Lo umsi wezilwanyana.
Kusuka kwi-oval encinci kuyimfuneko ukudweba umhlathi ngemeko yamatye amabini, njengesithombeni. Emuva kwe-oval enkulu, kufuneka udwebe enye i-oval. Le nto iya kuba yinxalenye enkulu yemilenze yezintindi. Umsila kufuneka udwetshwe emva. Ingaba yinto nayiphi na ubude.
Ukususela phezulu kwepau, kufuneka udwebe inxalenye engaphantsi kwayo, uzalise isigxina. Iphambili kufuneka imelwe ngephambili. Ngentanyeni, ukusuka kwinqanaba elincinci elisebenzela intloko, kwisiqu esikhulu, esikhulayo, sidlula indlebe. Ungayifakela nayiphi na ifomu, ngokwengqiqo yomculi.
Kwinqanaba lokugqibela, lihlala kuphela ukugqiba izitho ezingekhoyo, ukucima imigca engabonakaliyo kwaye uqaphele iinkcukacha. Kubalulekile ukubonakalisa iliso, impumlo, ulwimi, kunye nokupenda phezu kwendlebe, eya kwenza umdwebo ube mnandi.
Inja ikulungele. Ukutshintsha umlo womlomo, umsila kunye nezinye iinkcukacha, ngokwale cwangciso, unako ukudweba izinja zeentlobo ezahlukeneyo.
Umyalelo wesi-3: indlela yokudweba intshontsho
Ukuze udwebe intshontsho enhle kwisitepsi ngesinyathelo, kufuneka ulandele imiyalelo enjalo.
Okokuqala kufuneka udwebe amanani amabini: i-oval kwi-trunk kunye nesangqa esiya kuba yinkcazo yentloko yenja. Ukuze udwebe umgca, sebenzisa ipenseli enzima. Zombili izibalo zithintana.
Isinyathelo esilandelayo kukuba udwebe i-muzzle kunye ne-paws. Ekubeni i-puppy isesikhundleni sokuhlala, i-paw iya kuba yintathu. Umbhobho kufuneka utyalwe ngesimo se-oval, ehamba kunye nentloko. I-Paws ivuliwe kunye nemigca ephihliweyo, nganye kwindawo yayo, njengoko kuboniswe kwisithombe.
Ngoku kwakhona kufuneka ubeke ingqalelo kwi-dog's dog. Isangqa esisebenzela intloko kufuneka ihlulwe zibe zine, njengesithombeni. Ngomgca wecala, kwintlupheko yentloko kunye nesiqu, kufuneka udwebe impumlo. Kwimiqolo yesangqa kufuneka udwebe indlebe.
Ephakathi kwimizila encedisayo, kuyafuneka ukuba ubonise amehlo enja. Kwakhona ngaphantsi kwempumlo ngumgca womlomo.
Ixesha lokuba udwebe umsila, phawula iminwe kwi-paws. Ungabonisa ingcinga uze uqede kwezinye indawo indawo yobomi.
Ngoku unako ukusula imigca encedisayo kunye ne-eraser, ukwenzela ukuba umzobo ube ngakumbi. Ukusebenzisa ipenciliti elithambileyo, lungisa utshintshi kwaye ungeze iinkcukacha.
Kule nqanaba, kufuneka udibanise izithunzi ezinika umqulu wesithombe. Umthunzi ngokukhethekileyo kufuphi nombhobho, kwimilenze nangaphantsi kweendlebe. Iimvulo zifakwe ipenciliti elula. Emva kokwenza imivimbo embalwa, kufuneka utyumle iminwe yakho ngokulula.
Umqulu ongakumbi unokufumaneka xa ukuthungca izithunzi kufomelele. Kwi-paws yenja kufuneka udwebe iiflawu, kwaye usebenzisa i-eraser ukuze wenze impumlo ekugqibeleni.
Yonke into, umzobo ulungele. Ndandinomntwana omhle.
Isiyalelo 4: indlela yokudweba inja ehlazileyo
Izinja zohlobo lwe-Husk zithathwa njengento eyodwa. Aba ngabahlobo bokwenene kubantwana nakubantu abadala. Dweba inyathelo yenja ngesinyathelo phantsi kwalo myalelo nokuba umntwana angayenza.
Okokuqala, kufuneka wenze intambo yenja. Iqukethe imijikelezo emine yobukhulu obuhlukeneyo. Ezi zimbini ezinkulu zibekwe ngokufanayo. Ingqungquthela encinci iphezulu, idiagonally. Le yinkcazo yentloko yenja, inqumla enye enye ingqungquthela encinci. Ingumlomo. I-oval eyinqanaba elingezantsi iwela ngaphaya komnye umlinganiselo ofanayo, ombalwa kuphela ngobukhulu. Esi sisiseko se-hind paw. Ngaphakathi kwesikwere esiphakathi kufuneka udwebe isiseko sephambili phambi kwendlela yesangqa. Emva koko zonke iinombolo zixhunyiwe ngemigca ehamba phambili, njengesithombeni.
Ngoku ufanele uqedele ukudweba phambili nangemva kwee-paws, kwaye wenze iindlebe. Inja, i-acuminate. Kwakhona kuyimfuneko ukuqaphela umgangatho wamehlo, impumlo, idama.
Kule nqanaba, kufuneka udwebe umsila (ngokuba u-Husky uyanqanyulwa kwaye uqonde). Emva koko kufuneka umaka umhlathi kwaye ungeze iinkcukacha ezincinci. Kubalulekile ukujonga ngokucophelela umzobo kunye noboya obuninzi kwiindawo ezithile. Unokubonisa ukucinga kwakho okanye ulandele isithunzi esingezantsi.
Kuhlala kuphela ukulahla iimizila ezongezelelweyo kunye ne-eraser, ukulungisa amehlo kunye neentlobo eziphambili.
Ividiyo yabaqalayo: indlela yokudweba inja kwisinyathelo sepenisi ngesinyathelo
Le vidiyo iza kunceda ukudweba ipilisi ipencil ngokuchanekileyo. Ividiyo elandelayo ibonisa indlela yokudweba inja yohlobo lwe-Husk nge pencil. Esinye isifundo sevidiyo siya kunceda ukuthaka inja enhle.
Unokutsala njani ukuthanda u-feng shui?
Imisebenzi yabasetyhini abasecaleni
Ukutya ngeveki ngeMargarita Queen, iziphakamiso zeenkwenkwezi
Ii-Muffins ngeboya obumnandi bekotoni
Ioli yeBurdock - uncedo lweenwele
Imibongo emihle ngoFebhuwari 23, 2018
Imithetho ebalulekileyo yokunakekelwa kwesikhumba ebusweni nomzimba